DXF: ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụdị faịlụ a | Akụrụngwa n'efu
Enwere ike ị bịara isiokwu a n'ihi na ị maara faịlụ na DXF usoro na ị kwesịrị ịmatakwu banyere ha, ma ọ bụ naanị n'ihi ịmata ihe n'ihi na ị maghị ha. N'okwu abụọ ahụ, m ga-agba mbọ igosi gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ụdị faịlụ a dị oke mkpa n'ọhịa.
Na mgbakwunye, ị kwesịrị ịma na e nwere ọtụtụ ngwanrọ dakọtara na usoro a, ọ bụghị naanị AutoCAD nwere ike ịchekwa atụmatụ ma ọ bụ mepee ha na DXF. N'ezie, ohere dị ọtụtụ ...
1 Gịnị bụ DXF?
2 Kwekọrọ n'Ozizi software
3 3D na DXF mbipụta
4 DXF maka 3D na CNC obibi
Gịnị bụ DXF?
DXF bụ acronym na Bekee maka Nhazi usoro Darwing. Filedị faịlụ na ndọtị .dxf eji maka eserese ma ọ bụ atụmatụ kọmputa, nke ahụ bụ, maka CAD.
Autodesk, onye nwe ya na onye nrụpụta nke sọftụwia AutoCAD a ma ama, bụ onye mepụtara usoro a, ọkachasị iji mee ka mmekọrịta n'etiti faịlụ DWG nke sọftụwia ya na mmemme ndị ọzọ yiri ya na ahịa.
Bilie ke akpa ini na 1982, yana ụdị mbụ nke AutoCAD. Ma ọ bụ na ka oge na-aga, ndị DWG na-esiwanyewanye ike, na ibugharị ya site na DXF gbagwojuru anya. Ọ bụghị ọrụ niile DWG kwadoro ka ebugara na DXF ma nke a na - ebute nsogbu na ndakọrịta.
Na mgbakwunye na, DXF e kere dị ka ụdị ịbịaru ibe faịlụ ga- usoro zuru ụwa ọnụ. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịchekwa ụdị CAD (ma ọ bụ 3D ịme ngosi uwe) ma jiri ya na ngwanrọ ndị ọzọ ma ọ bụ nke ọzọ. Nke ahụ bụ, onye ọ bụla nwere ike ibubata ma ọ bụ bupụ site na ma ọ bụ gaa n'ụdị a dị mfe.
DXF nwere ihe owuwu yiri ebe nchekwa data, na-echekwa ozi ederede doro anya ma ọ bụ ọnụọgụ abụọ iji kọwaa nhazi na ihe nile o gha iji wughachi onye a.
Kwekọrọ n'Ozizi software
Enwere enweghi ngwụcha ngwa ngwanrọ nke nwere ike ijikwa faịlụ ndị a na usoro DXF, ụfọdụ nwere ike mepee ma gosipụta atụmatụ ndị ahụ, ndị ọzọ nwekwara ike ibubata / mbupụ yana gbanwee atụmatụ ahụ.
n'etiti ndepụta ngwanrọ mara na nke nwere ike dakọtara na DXF ga-egosipụta:
Blender (iji edemede mbubata)
Microsoft Office (Okwu, Visio)
Agba Shop Pro
Ogige dị mma
AKW .KWỌ NSỌ
Dabere na ikpo okwu nke ị na-arụ ọrụ ị nwere ike iji otu ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ. Ọmụmaatụ:
android- can nwere ike iji AutoCAD nke dịkwa maka ngwaọrụ mkpanaka ma nabata DXF.
Windows- I nwekwara ike iji AutoCAD na Design Review n’etiti ndị ọzọ, dịka TurboCAD, CorelCAD, CorelDraw, ABViewer, Canvas X, Adobe Illustrator, wdg.
MacOS: Enwere ọtụtụ usoro mmemme ewu ewu, otu n'ime ha bụ AutoCAD, mana ị nwekwara SolidWORKS, DraftSight, wdg.
Linux: otu n'ime ndị a maara nke ọma na nke a kacha eji eme ihe bụ LibreCAD, mana ị nwekwara ike iji DraftSight, Inkscape, Blender, FreeCAD, wdg.
Nchọgharị: imeghe DXF online, na-enweghị mkpa maka mmemme, ị nwekwara ike ime ha site na ihe nchọgharị kachasị amasị gị site na KekọrịtaCAD ma ọ bụ ProfiCAD.
Ma n'ezie, e nwere online na mpaghara ngwaọrụ tọghatara n'etiti ụdị faịlụ dị iche iche, gụnyere DXF. Ya mere, ị nwere ike tọghata ma ọ bụ site na usoro ndị ọzọ na-enweghị nsogbu. Agbanyeghị na anaghị m ekwe nkwa na imewe ga-abụ otu ihe ma ọ bụ ihe ezighi ezi ...
3D na DXF mbipụta
Ọ bụrụ na ị na-eji a 3D ngwa nbipute ịmara na e nwekwara software maka tọghata n'etiti dị iche iche formats akpali nnọọ mmasị. Ọ bụ ihe banyere ụzọ abụọ ndị a:
ntupu lab: bu ihe ngwanrọ mepere emepe, enwere ike iji ma dezie 3D meshes ma dezie ya. Can nwere ike iwepụta ihe na ụdị dị iche iche, dịka OBJ, OFF, STL, PLY, 3DS, COLLADA, VRML, GTS, X3D, IDTF, U3D na, n'ezie, DXF. Ọ dị maka Linux (ma na nchịkọta Snap na Universal na AppImage maka distro ọ bụla), macOS, na Windows.
MeshMixer: yiri nke gara aga, ihe ọzọ. Na nke a ọ bụkwa n'efu ma dị maka macOS na Windows.
DXF maka 3D na CNC obibi
Na ịba ụba nke 3D ebi akwụkwọ na CNC igwe Na ụlọ ọrụ, faịlụ DXF abụrụla ezigbo mkpa. I kwesịrị ịma na e nwere ụfọdụ weebụsaịtị na-enye gị ohere ibudata faịlụ DXF na atụmatụ ndị ejikere iji kwado owuwu nke ihe. N'ụzọ ahụ, ịgaghị eme ha n'onwe gị, nke na-enye aka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị maghị etu esi ejikwa sọftụwia CAD.
Enwere ụfọdụ weebụsaịtị ndị a na-akwụ ụgwọ, ya bụ, ị ga-akwụrịrị ndenye aha iji nwee ike ịnweta atụmatụ ma budata ha kpamkpam. Ndị ọzọ bụ free, na ị nwere ike ịchọta ntakịrị ihe niile. Site na logos dị mfe ka ị nwee ike ịmepụta ha site na DXF ebudatara na akụrụngwa gị, na ihe, ihe ịchọ mma, arịa ụlọ, efere, wdg.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite ịnwale DXF na mmemme sọftụwia ọ bụla edepụtara n'elu, ana m akwado ka ị jiri otu n'ime ndị a free weebụsaịtị:
DXF N'ihi CNC
DXF CNC Kere
CNC DXF faịlụ
Así ị ga-abụ maara nke ọma na usoro na atụmatụ ndị a, ma ọ bụ nwalee igwe ị zụrụ iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ ya n'ụzọ ziri ezi ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » DXF: ihe ị kwesịrị ịma gbasara ụdị faịlụ a